Nepali Rajneeti | अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओली रोकिएलान् ?
अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओली रोकिएलान् ?
बैसाख २६, २०७८ आइतबार १७१ पटक हेरिएको
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिलाई विफल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्रियता बढाएका छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द भएपछि ओलीले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेर चुनावमा जाने रणनीति बनाएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि ओलीका लागि अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ । त्यही विकल्पमा जान उनी सक्रिय भएका छन् ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको प्रयासलाई असफल बनाउन ओलीका लागि जनता समाजवादी पार्टीको कम्तिमा १८ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा या तटस्थ बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा एमालेको माधव नेपाल समूहका नेताहरुले राजीनामा दिएर भएपनि देउवाका लागि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन सक्छन् । अब ओलीका लागि उपेन्द्र यादवको पक्षमा गएका सांसदहरुलाई देउवाको विपक्षमा पार्नु नै मिसन हुने देखिएको छ ।
देउवाले पनि ओलीलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न जसपाको कम्तिमा १५ सांसदलाई साथमा लिनुका साथै माधव नेपाल समूहका २१ जना सांसदको सामूहिक राजीनामा निश्चित गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिनेछन् ।